【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】လကျကောကျဝတျ နာ့ဗျကွောဖိမိခွငျး (Carpel tunnel syndrome) အကွောငျးသိကောငျးစရာ | Opinion Leaders
Carpel tunnel syndrome ဆိုတာ လကျကောကျဝတျမှာရှိတဲ့ median nerve လို့ချေါတဲ့ နာ့ဗျကွော ဖိမိလို့ ဖွဈလာတဲ့ ဆေးပညာအခွအေနတေခုပါ။ Median nerve နဲ့ လကျရဲ့ (Tendons) အရှတျ ၉ ခြောငျးရယျက လကျကောကျဝတျအတှငျးက carpel tunnel ဆိုတဲ့နရောကနေ ဖွတျသှားကွရငျး ဖိမိတာပါ။ အထူးသဖွငျ့ လကျကောကျဝတျကဉျြးသျောလညျး ယောကျြားလေးမြားမှာကဲ့သို့ အရှတျကွီးတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော တှရေ့တတျသညျ။
ဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ -
-ကှနျပြူတာစာရိုကျခွငျးနှငျ့ Vibrating tools တုနျခါစတေဲ့ ပစ်စညျးမြားဖွငျ့ ကိုငျတှယျအလုပျလုပျရသူမြား
-Rheumatoid Arthritis အရိုးလေးဘကျနာရှိသူမြား
-Acromegaly လို့ချေါတဲ့ ကွီးထှားမှုဟျောမုနျးမြားတဲ့သူတှေ
-လကျကို ကွာရှညျစှာ ကှေးပီး Splint စညျးထားရသူတှေ (ဥပမာ Colles splint)
-လကျကောကျဝတျအတှငျးမှာ lipoma ganglioma စတဲ့ အကတျြရှိသူတှေ
-Amyloidosis, Sarcoidosis စတဲ့ ရောဂါရှိသူတှေ မှာ တှရေ့တတျပါတယျ။
Median nerve ကလကျရဲ့ ဘယျနရောတှကေို supply လုပျနတောလဲ?
Median nerve ဆိုတာ လကျရဲ့ လကျမ လကျညှိုး လကျခလယျနဲ့ လကျသူကွှယျရဲ့ တခွမျးအထိ ထိတှခေံ့စားမှုကို ပေးနတေဲ့ နာဗျ့ကွောတခြောငျးပါ။ ဒါ့အပွငျ လကျမကို အခွားလကျခြောငျးလေးတှဆေီကနေ ခှာဖို့လုပျတဲ့နရောမှာ ပါဝငျတဲ့ ကွှကျသား(Abductor pollicis brevis) ကိုလညျး ပေးပါတယျ။
Carpel tunnel syndrome ဖွဈရငျ ဘယျလိုလက်ခဏာတှနေဲ့ တှရေ့မှာလဲ?
-လကျနဲ့ လကျမောငျးတလြှောကျ ကိုကျခွငျး (အထူးသဖွငျ့ ညဘကျတှမှော ပိုဖွဈလရှေိ့တယျ)
-လကျမ လကျညှိုး လကျခလယျ တှငျ ထုံကငျြခွငျး (အိပျနစေဉျဖွဈလရှေိ့သဖွငျ့ ကုတငျဘေးသို့ လကျကို တှဲလောငျးခခြွငျး သို့မဟုတျ ခါပေးခွငျးဖွငျ့ သကျသာလရှေိ့သညျ)
-လကျမအောကျရှိ ကွှကျသားမြားသိမျခွငျး (Wasting of thenar eminence) နှငျ့ လကျမကို လကျခြောငျးလေးမြားမှ မကားနိုငျခွငျး
Carpel tunnel syndrome အတှကျ သီးသနျ့စဈဆေးနိုငျတဲ့ test နှဈခုရှိပါတယျ။
(၁)Phalen's test - လကျကောကျဝတျကို တဈမိနဈကွာ လုံးဝကှေးထားမယျဆိုရငျ အပျေါမှာ ဖျောပွထားတဲ့ လက်ခဏာတှေ တှရေ့ခွငျးဖွဈပါသညျ။
(၂)Tinel's test - လကျကောကျဝတျက နာ့ဗျကွောရှိတဲ့နရောကို ခေါကျကွညျ့ရငျ ကငျြတာကိုခံစားရခွငျးဖွဈပါတယျ။
(ဖျောပွပါ test နှဈခုလုံးမှာ ရောဂါ diagnosis ကို အတိအကတြော့ မပေးနိုငျပါ။)
-ဖျောပွပါ Tests တှေ positive ဖွဈရငျတော့ ထိတဲ့နရောနှငျ့ ဘယျလောကျဖိမိတာ ဆိုးရှားကွောငျး သိနိုငျဖို့ နာဗျ့ကွောကို စဈဆေးခွငျး (Neurophysiology, Nerve conduction study and electromyography) လုပျကွညျ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။
Splint စညျးခွငျး - လကျကောကျဝတျကို တဖွောငျ့တညျးဖွဈအောငျ စညျးထားခွငျးဖွဈပါသညျ။
လကျကောကျဝတျသို့ စတီးရှိုကျ ထိုးခွငျးကလညျး သကျသာစပေါတယျ။
ခှဲစိတျခွငျး (Surgery with carpel tunnel release) - ဖိမိနတေဲ့ နာဗျ့ကွောကို လှတျသှားအောငျ ခှဲစိတျခွငျးဖွဈပါသညျ။
Carpel tunnel syndrome ဆိုတာ လက်ကောက်ဝတ်မှာရှိတဲ့ median nerve လို့ခေါ်တဲ့ နာ့ဗ်ကြော ဖိမိလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ဆေးပညာအခြေအနေတခုပါ။ Median nerve နဲ့ လက်ရဲ့ (Tendons) အရွတ် ၉ ချောင်းရယ်က လက်ကောက်ဝတ်အတွင်းက carpel tunnel ဆိုတဲ့နေရာကနေ ဖြတ်သွားကြရင်း ဖိမိတာပါ။ အထူးသဖြင့် လက်ကောက်ဝတ်ကျဉ်းသော်လည်း ယောကျာ်းလေးများမှာကဲ့သို့ အရွတ်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ တွေ့ရတတ်သည်။
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
-ကွန်ပျူတာစာရိုက်ခြင်းနှင့် Vibrating tools တုန်ခါစေတဲ့ ပစ္စည်းများဖြင့် ကိုင်တွယ်အလုပ်လုပ်ရသူများ
-Rheumatoid Arthritis အရိုးလေးဘက်နာရှိသူများ
-Acromegaly လို့ခေါ်တဲ့ ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းများတဲ့သူတွေ
-လက်ကို ကြာရှည်စွာ ကွေးပီး Splint စည်းထားရသူတွေ (ဥပမာ Colles splint)
-လက်ကောက်ဝတ်အတွင်းမှာ lipoma ganglioma စတဲ့ အကျတ်ရှိသူတွေ
-Amyloidosis, Sarcoidosis စတဲ့ ရောဂါရှိသူတွေ မှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
Median nerve ကလက်ရဲ့ ဘယ်နေရာတွေကို supply လုပ်နေတာလဲ?
Median nerve ဆိုတာ လက်ရဲ့ လက်မ လက်ညှိုး လက်ခလယ်နဲ့ လက်သူကြွယ်ရဲ့ တခြမ်းအထိ ထိတွေ့ခံစားမှုကို ပေးနေတဲ့ နာဗ့်ကြောတချောင်းပါ။ ဒါ့အပြင် လက်မကို အခြားလက်ချောင်းလေးတွေဆီကနေ ခွာဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြွက်သား(Abductor pollicis brevis) ကိုလည်း ပေးပါတယ်။
Carpel tunnel syndrome ဖြစ်ရင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့ တွေ့ရမှာလဲ?
-လက်နဲ့ လက်မောင်းတလျှောက် ကိုက်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ညဘက်တွေမှာ ပိုဖြစ်လေ့ရှိတယ်)
-လက်မ လက်ညှိုး လက်ခလယ် တွင် ထုံကျင်ခြင်း (အိပ်နေစဉ်ဖြစ်လေ့ရှိသဖြင့် ကုတင်ဘေးသို့ လက်ကို တွဲလောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ခါပေးခြင်းဖြင့် သက်သာလေ့ရှိသည်)
-လက်မအောက်ရှိ ကြွက်သားများသိမ်ခြင်း (Wasting of thenar eminence) နှင့် လက်မကို လက်ချောင်းလေးများမှ မကားနိုင်ခြင်း
Carpel tunnel syndrome အတွက် သီးသန့်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ test နှစ်ခုရှိပါတယ်။
(၁)Phalen's test - လက်ကောက်ဝတ်ကို တစ်မိနစ်ကြာ လုံးဝကွေးထားမယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၂)Tinel's test - လက်ကောက်ဝတ်က နာ့ဗ်ကြောရှိတဲ့နေရာကို ခေါက်ကြည့်ရင် ကျင်တာကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(ဖော်ပြပါ test နှစ်ခုလုံးမှာ ရောဂါ diagnosis ကို အတိအကျတော့ မပေးနိုင်ပါ။)
-ဖော်ပြပါ Tests တွေ positive ဖြစ်ရင်တော့ ထိတဲ့နေရာနှင့် ဘယ်လောက်ဖိမိတာ ဆိုးရွားကြောင်း သိနိုင်ဖို့ နာဗ့်ကြောကို စစ်ဆေးခြင်း (Neurophysiology, Nerve conduction study and electromyography) လုပ်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Splint စည်းခြင်း - လက်ကောက်ဝတ်ကို တဖြောင့်တည်းဖြစ်အောင် စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လက်ကောက်ဝတ်သို့ စတီးရွိုက် ထိုးခြင်းကလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်း (Surgery with carpel tunnel release) - ဖိမိနေတဲ့ နာဗ့်ကြောကို လွတ်သွားအောင် ခွဲစိတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။